Okwu nke atọ Elifaz kwuru (1-30)
“È nwere uru mmadụ ga-abara Chineke?” (2, 3)
O kwuru na Job dị anyaukwu nakwa na o mesiri ndị ọzọ ike (6-9)
‘Lọghachikwuru Chineke ka ihe dịrị gị ná mma’ (23)
22 Elifaz+ onye Timan kwuru, sị: 2 “È nwere uru mmadụ ga-abara Chineke? È nwere uru onye nwere nghọta ga-abara ya?+ 3 Ọ̀ gbasara Onye Pụrụ Ime Ihe Niile* na ị bụ onye ezi omume? Ka è nwere uru ọ na-erite na ị bụ onye na-enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta?*+ 4 Ọ̀ ga-ata gị ahụhụMa kpọọ gị ikpe maka na ị na-asọpụrụ ya? 5 Ọ̀ bụ na ọ bụghị maka na ihe ọjọọ ị na-eme karịrị akarị,Mmehie gị anaghịkwa akwụsị akwụsị?+ 6 N’ihi na ị na-anara ụmụnne gị ihe ibé n’ihe ị na-ekwesịghị ịnara ihe ibé,Ị na-eyipụkwa ndị mmadụ ákwà ha ka ha gbara ọtọ.*+ 7 Ị naghị enye onye ike gwụrụ mmiri ka ọ ṅụọ,Ị naghịkwa enye onye agụụ na-agụ nri.+ 8 Ọ bụ onye ukwu nwe ala,+Ọ bụkwa onye a hụrụ n’anya na-ebi na ya. 9 Ma ị gbawara ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ aka sị ha lawa,I mesikwara ụmụ na-enweghị nna* ike. 10 Ọ bụ ya mere e ji siere gị ọnyà* gburugburu,+Ụjọ na-atụkwa gị na mberede. 11 Ọ bụ ya mere ọchịchịrị ji gbachie nke na ị naghị ahụ ụzọ,Idei mmiri ekpuchiekwa gị. 12 Ọ̀ bụ na Chineke anọghị n’ebe kacha elu n’eluigwe? Lee, kpakpando niile dịkwa ezigbo elu. 13 Ma ị sịrị: ‘Gịnịdị ka Chineke ma? Urukpuru ọ̀ ga-ekwe ya hụ ụzọ kpee ikpe? 14 Ígwé ojii na-anọchi ya nke mere na ọ naghị ahụ ụzọKa ọ na-agagharị gburugburu eluigwe.’ 15 Ị̀ ga-esoro ụzọ ochieNke ndị ajọ omume jere ije na ya, 16 Ndị ọnwụ gburu tupu oge ha eruo Otú idei mmiri* si ebupụ ntọala ụlọ?+ 17 Ha nọ na-asị ezi Chineke: ‘Hapụ anyị aka!’ Na-asịkwa, ‘Gịnị ka Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ga-eme anyị?’ 18 Ma, ọ bụ ya mere ka ihe ndị dị mma ju n’ụlọ ha. (Anaghị m eche ụdị ihe ọjọọ a n’obi m.) 19 Onye ezi omume ga-ahụ ihe a ṅụrịa ọṅụ. Onye aka ya dị ọcha ga-akwa ha emo, sị: 20 ‘E bibiela ndị iro anyị,Ọkụ ga-erechapụkwa ihe fọrọ na ha.’ 21 Mata onye Chineke bụ, gị na ya ga-adị ná mma. Ihe ọma ga-eruzi gị aka. 22 Nabata iwu si n’ọnụ ya,Ka ihe o kwuru dịrịkwa n’obi gị.+ 23 Ọ bụrụ na ị lọghachikwuru Onye Pụrụ Ime Ihe Niile, ihe ga-adịghachiri gị ná mma.+ Ọ bụrụ na i wepụ ajọ omume n’ụlọikwuu gị, 24 Ọ bụrụ na ị ga-atụnye ọlaedo gị n’ájá,Tụbakwa ọlaedo kacha mma*+ ná nnukwu nkume ndị dị na ndagwurugwu, 25 Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ga-abụziri gị ọlaedo,Ọ ga-abụkwara gị ọlaọcha kacha mma. 26 Ị ga na-enwezi obi ụtọ maka na gị na Onye Pụrụ Ime Ihe Niile dị ná mma,Ị ga-ewelikwa ihu gị lee Chineke. 27 Ị ga-arịọsi ya arịrịọ ike. Ọ ga-anụ olu gị. Ị ga-emezukwa nkwa i kwere. 28 Ihe ọ bụla i kpebiri ime ga-aga nke ọma,Ìhè ga na-enwukwa n’ụzọ gị. 29 N’ihi na a ga-eweda gị ala ma i kwuo okwu na-egosi na ị dị mpako. Ma ọ ga-azọpụta onye dị umeala n’obi. 30 Ọ ga-anapụta ndị na-enweghị ihe ha mere. N’ihi ya, ọ bụrụ na aka gị dị ọcha, ọ ga-anapụta gị.”
^ Ma ọ bụ “Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ọ̀ na-enwe obi ụtọ.”
^ Ma ọ bụ “ị kwụsiri ike n’ebe ọ nọ.”
^ Na Hibru, “Ị na-eyipụ ndị gba ọtọ ákwà ha.”
^ Okwu Hibru a sụgharịrị ebe a pụtara ọnyà ma ọ bụ ụgbụ e ji ejide nnụnụ.
^ Na Hibru, “osimiri.”
^ Ma ọ bụ “ọlaedo Ofa.”